घट्न थाल्यो दिनदिनै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ? तोलामा कतिले घट्यो , हेर्नुहोस्::Nepal's Digital Paper
घट्न थाल्यो दिनदिनै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ? तोलामा कतिले घट्यो , हेर्नुहोस्
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्न थालेको छ । शुक्रबार पनि घटेको सुनको मूल्य आज घटेको छ। शुक्रबार ७२ हजारमा कारोबार भएको प्रतितोला सुन आइतबार पाँच सय रुपैयाँ घटेको हो । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारका लागि प्रतितोला सुनको मूल्य ७१ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य पनि घटेको छ । आइतबार नेपाली बजारमा तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार २ सय निर्धारण गरिएको छ ।
अघिल्लो हप्ताको बुधबार प्रतितोला सुनको मूल्य ७३ हजार ५ सय पुगेको थियो । यो अहिले सम्मकै सबैभन्दा उच्च मूल्य हो । उच्च मूल्यमा एक सय रुपैयाँ घटेर बिहिबार ७३ हजार ४ सयमा सुनको कारोबार भयो । शुक्रबार भने १४ सयले घट्दै ७२ हजार पुग्यो ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ओरालो लाग्न थालेपछि नेपाली बजारमा पनि घट्न थालेको हो ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस सुनको मूल्य १५०६ अमेरिकी डलरको आसपास छ ।यस्तै , चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आइतबारका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य ८ सय ८५ कायम भएको छ । शुक्रबार सोहि चाँदीको मूल्य ९ सय थियो ।
तीन हजारले घट्यो दश दिनमै सुनको मूल्य, आज कति ?
खुसीको खबर ; लगातार बढेको सुनको मुल्य एक्कासी तोलामै चार सयले घट्यो
स्थिर रहेको सुनको भाउ एक्कासी तोलामै २ सयले घट्यो …
७ सय रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज भने स्थिर !